Huawei: hampakatra ny veto any Etazonia i Etazonia | Androidsis
Iray volana mahery izao ny veto US any Huawei dia nambara. Noho io marika marika sinoa io ihany tsy afaka mampiasa android amin'ny telefaona vaovao handeha hanomboka, ankoatry ny tsy fahazoana singa avy any Amerika. Noho izany, noterena hiasa amin'ny rafitra fiasa ny marika. halefa amin'ny fararan'ity taona ity, araka ny nolazain'izy ireo avy amin'ny orinasa.
Ity faran'ny herinandro ity dia atao any Japon ny G20. Amin'ity fihaonana an-tampony ity dia efa nisy ny fihaonana teo amin'i Sina sy Etazonia. Ny iray amin'ireo olana horesahina ao dia ny fanakanana ny Huawei. Betsaka ny nanantena fa ho fantatra bebe kokoa ny zavatra hitranga amin'ny marika sinoa, izay nitranga ihany tamin'ny farany. Miaraka amin'ny vaovao tsara.
toy ny Donald Trump dia nanambara fa nesorina ny beto ho an'i Huawei. Vaovao tsara ho an'ny orinasa, izay amin'ity fomba ity dia afaka mandray singa avy any Amerika indray. Ankoatry ny fahaizany manohy mampiasa Android amin'ny findainy, na dia efa matoky an'io aza ny marika mandritra ireo herinandro, nanambara fa misy telefaona 17 hanana Android Q.
Na dia hitohy ampahany amin'ny vokatra sasany aza ity veto ity, azo antoka fa amin'ny fitaovana ho an'ny 5G. Nilaza ny filoha amerikana fa hamela ny marika sinoa hivarotra vokatra izay tsy loza mitatao ho an'ny filaminam-pirenena izy ireo. Na dia tsy voalaza aza izany amin'izao fotoana izao amin'ity fivoriana ity.
Ny fampiakarana an'io veto amin'ny Huawei io dia hiasa kely. Ny 19 aogositra izao, izay daty nifaranan'ny fiatoana azo tamin'ny orinasa. Ka amin'ity daty ity dia hiverina amin'ny laoniny ho an'ny orinasa ny zava-drehetra. Hanohy hampiasa Android izy ireo, manavao sy afaka mampiasa fampiharana toa ny Facebook na WhatsApp amin'ny findainy. Taorinan'ny honohono nandritra ny herinandro maro, satria nihevitra ny rehetra fa paikadin'i Donald Trump ny manery an'i Shina hanatanteraka fifanarahana.
Ireo firenena roa ireo dia mamerina mandinika ny fifanarahana ara-barotra. Ny fifanarahana dia vaovao tsara ho an'i Huawei ihany koa, fa amin'ity fomba ity dia afaka miverina indray ianao, rehefa nahita ny fianjeran'ny varotra tao anatin'ity herinandro ity. Na dia efa namidin'ny marika sinoa aza ny Faritra P30 ary efa nihoatra Telefaona 100 tapitrisa namidy hatreto amin'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Etazonia dia hanainga ny veto amin'ny Huawei
Nilaza i Trump fa afaka manao orinasa miaraka amin'i Huawei ireo orinasa amerikana